Jamal Khaashoqji oo maydkiisa laga raadinayo kaymaha - BBC News Somali
Jamal Khaashoqji oo maydkiisa laga raadinayo kaymaha
Image caption Saraakiisha Turkiga ayaa baadhitaan ku sameeyey qunsuliyadda Sucuudiga iyo hooyga qunsulka.
Sida ay wararku sheegayaan booliiska Turkiga ayaa ballaariyey baadhitaanka ay ku hayaan kiiska Saxafigii Sucuudiga u dhashay ee la sheegay in la dilay Jamal Khashoggi.
Maqnaashaha Khashoggi iyo Saameynta Sacuudiga u geysatay
Ma suuragal baa in xog laga helo saacadda uu xirnaa Khashoggi?
Waxaa socda baadhitaan lagu samaynayo waxyaabo loo malaynayo in ay caddaymo noqon karaan oo laga soo qaaday todobaadkaan qunsuliyadda Sucuudiga iyo hooyga madaxa qunsuliyadda, lagana baari doonaa hidda sidaha Mr Khashoggi.
Dhacdadaan ayaa sababtay in xukuumadda Riyadh uu culays badani kasoo fuulo dhanka reer galbeedka ay xulufada yihiin, wasiirka maaliyadda Maraykanka Steven Mnuchin iyo Xoghaya ganacsiga caalamiga ah ee Britain Liam Fox ayaa noqonaya masuuliyiintii sarsare ee ugu dambeeyey ee qaaddaca shir ballaaran oo ganacsi oo ka dhacaya Riyadh toddobaadka dambe.
Maxaa ku dhacay Jamal Khashoggi?
Wali ma cadda. Balse Mr Khashoggi ayaa markii cid ugu war dambaysay galay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul 2-dii October, si uu ugasoo qaato warqado u oggolaanaya in uu guursado gabadhii u doonnayd ee Hatice Cengiz.
Saraakiisha Turkiga ayaa rumaysan in Mr Khashoggi ay qunsuliyadda ku dhex dileen koox katirsan sirdoonka Sucuudiga, oo ay maydkiisiina meesha ka saareen.
Sucuudi Carabiya ayaa beenisay eedaymahaas, waxayn ugu horrayntii ku adkaysatay in Mr Khashoggi uu safaaradda ka baxay asagoo xor ah.